Ndiyabulela ngu-AC / DC - Izinto Zobugcisa
Ndiyabulela ngu-AC / DC
Eli litye lokuqhushumba laqala lakhutshwa ngo-1975 kwilizwe lasekhaya le-AC / DC kwilizwe lase-Australia kwicwecwe labo lesibini, ekwabizwa ngalo Uhambo . Ukukhutshwa kwabo kokuqala base-Australia kudityaniswe kwifom Qaphela oPhezulu , eyakhululwa ehlabathini lonke. I-albhamu ihambe kakuhle eYurophu, kodwa yadibana nokuqina eMelika: Amatye agiqekayo bayibiza ngokuba 'lixesha lonke eliphantsi' kwilitye elilukhuni kuphononongo lwabo olunamandla.
Le yayiyenye yee-AC / DC zokuqala kunye noBon Scott kwizwi eliphambili. Ekuqaleni i-roadie, wathatha amazwi akhokelayo xa imvumi yabo yokuqala, uDave Evans, engakhange abonise gig.
I-AC / DC ifumene indlela elungileyo yokufumana amandla kwimiboniso yabo ye- Qaphela oPhezulu i-albhamu: bangene studio kwaye barekhoda kanye emva kweegigs. Isiphumo sasinesandi esiluhlaza kakhulu, kodwa sasinamandla, sityibilikiswa yimveliso nguHarry Vanda kunye noGeorge Young (umntakwabo Angus noMalcolm), ababengamalungu eqela i-Easybeats, baziwa kakhulu ngengoma yabo ethi 'NgoLwesihlanu Engqondweni Yam.'
Ndiyabulela imele iTrinitrotoluene, into eqhumayo. Yayisaziwa kwi Imbaleki yendlela iikhathuni xa iCoyote yayiza kuthenga izinto ezinesiqhushumbisi (kwi-Acme) ebhalwe 'TNT' ngelinge lokuqhushumisa iMbaleki yendlela. Kude kube ngoku, i-coyote khange ikwazi ukwenzakalisa i-Road Runner nangayiphi na indlela, kwaye yenze umonakalo omkhulu kuye ngokusetyenziswa ngokungakhathali kweemveliso ze-Acme.
Ingoma idlala kwifilimu ka-2006 Ubusuku beTalladega: IBallad kaRicky Bobby . UGary Cole uphinde wenza indima yakhe njengo-Reese Bobby kunye nomgca we iconic, 'ukuba awungowokuqala, ungowokugqibela' Intengiso yeDodge ka-2020 Ebonise ingoma ye-AC / DC ethi 'Shot In the Dark.'
Awusandithandi tu lyrics
Ukucoca i-closet yam eminem iingoma
Inombolo yendlela yobomi eyi-9
daniel bedingfield ukuba awuyiyo le ngoma